Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey ee Musharaxa m/weynimada Somaliya Prof Warfaa.
Wararkii ugu danbeeyey ee Musharaxa m/weynimada Somaliya Prof Warfaa.
Khamiis 17,Maarso 2011(HSOL)-Prof Ahmed Muumin Warfaa oo ah muwaadin Somaliyeed wax badana bare ka ahaa jaamacadii umada Somaliyeed ayaa isku soo taagay inuu tartan u galo hogaanka dalka ugu sareeya, kedib markii ay taladaasi u soo jeediyeen muwadiniin Somaliyeed oo isaga si wanagsan u yaqiinay mudo.
Waa aabe xaas iyo caruur leh. ka hor intii uusan go'aansan in uu isku soo sharaxo hogaanka dalka ugu sareeya ,waxuu Bare ka ahaa jaamacad ku taala dalkaasi Mareykanka. marka laga soo tago inuu yahay qabiir seynis yahayn ah oo Somaliyeed waa nin si wanaagsan diinta u yaqaana oo ahalu towxiid ah. hadaba tan iyo markii uu bilaabay ololahiisa musharaxnimo ilaa maanta waxaanu dul mar guud ku sameyneynaa halka ay wax u marayaan iyo sida ay u arkaan qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed.
Prof Warfaa waxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u tartamayo xilka madaxweynenimada Somaliya horaantii sanadkan. waxuu shirkii ugu horeyey oo ay shacab Somaliyeed iskugu yimaadaan ku qabtay gobolka Minnesota oo ah gobol ay Somalidu ku badan tahay kana mid ah gobolada dalkaasi Mareykanka ku yaala. aaqirkii bishii ina dhaaftay waxaa lagu casuumay jamacad ku taalada magaalada Markato, MN halkaasi oo uu kula kulmay jaaliyada Somaliyeed ee ku sugan magaaladaasi oo si weyn ugu soo dhaweeyey halkaasi.
Isla bishaasi waxuuu u dhoofay dalkaasi Kenya isagoo ka bilaabay halkaasi ololahiisa musharaxnimo. waxuuna la kulmay qeynaha kala duwan ee Somalida ku nool wadankaasi Kenya.ka hor intii uusan la kulmin xildhibaanada dowlada Somaliya ka jooga dalkaasi Kenya waxuu siyaabo kala duwan ula kulmay waxgarad, culimo, dhaliyaro iyo haweenka Somaliyeed ee halkaasi kunool iyagoo dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyey musharaxa oo hadafkiisa si sahlan uga dhaadhicinaya shacabka Somaliyeed maadama uu mudo soo ahaa macalin jaamacadeed amaba Bare.
Waxaa iyaduna xusid mudan inuu si gooyni ah ula kulmay jaaliyada reer Hiiraan kuwooda ku sugan Kenya kedibna u sheegay inuu la kulmi doono xildhibaanada Somaliyeed sidaasina uu dhawaantan Hilton Hotel ugu qabtay shirkii ugu weynaa ee uu ku qabto Kenya.
Shacabka Mogdisho iyo hadal heyntoooda.
Markaad joogto meelaha ay shacabku iskugu yimaadaan ee loo yaqaano fadhi ku dirirka inta badan lagama hadlayo dagaalada ka jira Mogdisho laakinse dadku waxey ka hadlayaan xukumada hada jirta mida bedeli doonta midabka ay yeelan doonto. waxeyna dadku inta badan iyagoon qaarkood arkin aragtiyo kala duwan ka bixinayaan musharaxa Prof Warfaa oo aad ula yaabeen qaabka uu ku bilaabay musharaxnimadiisa. qaar waxey leeyahiin ninkani umado kale ayaa wata waayo dhawr bil ka hor ayuu isa soo qadimay oo waa hore ayuu u ogaa in aan xukumadani loogu dareyn waqtigeeda maalin kale. halka musharaxiinta kale ee imaan doonta ay iyagu ku mashquulayeen iney bal ogaadaan meesha ay dabeyshu u socoto.
Qaar kale oo ganacsato u badan oo iyagu ku mashquulsan sidii ay u heli lahaayeen dowlad wadanka dhan gacanta ku dhigta oo hantidooda u ilaalisa waxey leeyahiin Prof Warfaa waa midka ugu macquulsan ee ku haboon xilkaani.
Qaar howl geb noqday oo ka tirsanaa ciidamadii hore ee Somaliya waxey leeyahiin waa nin ilaah u soo diray umada Somaliyeed hadii uu ku guuleystana ayey yiraahdeen in cadaaladu shacabka Somaliyeed oo dhan wada gaari doonto ayey ku nuux nuux sadeen.
Culimada Somaliyeed iyo dadka ehelka u ah diinta waxey qabaan inuu yahay Prof Warfaa ninka ugu dhaw ee runta u sheegi kara amaba isku soo dhaweyn kara fikir kala duwanaanta ku kala dhax jirta culimada Somaliyeed oo iyagu qeyb ka ah mushkilada iyo colaadaha ka jira Somaliya nabad iyo wada hadal leyku haleyn karona wuu ka keeni karaa ayey leeyahiin kooxahaan isku heysta xukunka dalka Somaliya ileen meesha wax kale oo leysku heysta ma jirtee.
Bay, bakool, Shabeelooyinka, labada jubo iyo Gedo shacabkooda
Inta badna shacbakaasi waxey fikir ahaan iskaka mid yahiin in dalka Somaliya loo helo dowlad shacabka u qaban karta adeegyadii guud ee lumay mudada 20ka sano ah madaama ay goboladaasi yahiin kuwo wax soo saar leh oo hadii dhul ahaan looga faa'ideeyo dadka degan iyo Somaliweynba ay nolosha shacabka Somaliyeed ay wax badan iska bedelayaan. sidoo kale siyaasiyiinta degaanadani ka soo jeeda ayaaba hada siyaabo ka duwan ula kulmaya mushaxa u taagan hogaanka dalka Prof Warfaa iyagoo ku dhiirageliyey inuu yahay muwaadin Somaliyeed oo mudan xilkaan iyo ka badan horeyna u socdo waana meelaha ugu badan ee ay kalsoonida musharaxa ka timid marka xaqiiqda jirta dib loogu laabto. dadka degaanadaasi ka soo jeeda waa dad dhulka ay degan yahiin ilaah ku madneystay qeyraad ha yeshee u ooman nidaam dowladeed iyo kala danbeyn waana dhacabka ugu badan ee ay colaadahii Somaliya ka jiray waxyeelo iskugu jirtay naf iyo maalba ka soo gaartay 20kii sano ina dhaaftay, hadii aan sadaal ka bixino musharaxa Prof Warfaa xildhibaanada ugu badan ee codkooda siin doona waxey ka soo jeedaan goboladaas waa hadii dib loo eego Somalinimadii iyo horumarkii uu wadanku lahaa beri samaadkii maskax caafimaad qabtana la isticmaalo.
Dhinacaas iyo Hiiraan shacabkoodu.
Markaad si toos ah iyo si dadban ula xiriirto shacabka Hiiraan waxey ku leeyahiin waqtigeenii ayaa la joogaa in kasta oo ay Prof Warfaa arintani ku dhaliyeen qaar kamid ah Shacabka Somaliyeed hadane waa muwaadin Somaliyeed oo reer Hiiraan ah waanu garab taaganahay ayey ku cel celinayaan. waxaa taasi ka sii daran iyagu reer Hiiraan ahaan ayey u hadlayaan uma hadlayaan reer goyni ah waxeyna leeyahiin waxaanu ku talo jirna hadii xildhibaanada dowlada Somaliya maskax caafimaad qabto isticmaalaan in uu ku guuleysan doono doorashada soo socota bisha July.
Intooda badan shacabka Hiiraan waxey u arkaan in shaqsi reer Hiiran ah uu noqdo madaxweynaha Somaliya waxeyna farta kuu fiiqayaan inuu madaxweynahii ugu horeeyey ahaa Adan Cabdulle Cismaan oo reer Hiiraan ahaa uuna noqday hogaamiyahii ugu horeeyey ee African ah oo inta laga guuleysta xukunka si sharaf leh uga degay. waxeyna hada leeyahiin maadama ay hogaamiyaal badan oo Somaliyeed mudo 20 sano ah ka badan u suuroobi weysay iney shacabka Somaliyeed isku keenaan oo ay mideeyaan ay hada rajeynayaan inuu shaqsi reer Hiiraan ah uu noqdo midka Somali isku keeni doono, taasi oo ay guul u arkaan bulshada reer Hiiraan.
Gobolada dhexe ee Somaliya iyo shacabkooda.
Runtii waxaadba moodaa iney reer Hiiran ugu dheereeyaan howshaan iyo ololahaan markaad aragto dadaalkooda iyo hadal heyntooda waayo mar hadii uu hogaamiye reer Hiiraan ah yimaado iyagu waxey u arkaan iney iyagu guuleysteen dalkuna uu nabad noqon doono bulshaduna is dhaxgali doonto si weyn ayeyna u soo dhaweeyeen musharaxa madaxweynimada Somaliya Prof Warfaa.
Punland iyo Somaliland shacabkoodu.
Shacbaka Puntland hadaan ku hormaro iyagu si wanagsan ayey u yaqaanaan Prof Warfaa maadama uu xiligii taqasuskiisa jaamacada uu mudo ku sugnaa gobolka Bari waxeyna u arkaan inuu yahay nin howshaani ka bixi kara iyagooba ka mid ahaa Somalidii ku dhalisay fikirkaan inuu hogaanka dalka isku soo taago.
Somaliland shacabkeeda iyo siyaasiyiintooda.
Runtii intooda badan waxey aaminsan yahiin hadii ay isku raacaan iney dalka intiisa kale ka go,aan inuusan caburin doonin laakinse waxey aaminsan yahiin hadeyba hor fadhiistaan Prof Warfaa oo madaxweyne ka ah dalka Somaliya iney ka helayan xuquuqda ay dalka intiisa kale ku leeyahiin iyadoonba la kala tagin. waayo Somaliland shacabkooda weey waayeen hogaamiye Somaliyeed oo si toos ah u hor fadhiista midkasta oo yimaada wadamada reer Galbeedka ayuu warqad dhigayaa waxuuna leeyahay dalka intiisa kale kama go'i karaan war aaway hadeysan go'een xaq uma lahan miyaa in la hor fadhiisto oo af Somali ayey ku hadlaane laga qanciyo waxa ay tabanayaan, iyo iyadooba aysan jirin qaab lagula hadli karay maadama ay koofurta Somaliya qasneyd. ha yeeshee Somaliland shacabkooda sidaan masii ahaan doonaan howshooda sidey iyagu jecel yahiin ayey ku dhamaan doontaa marka xaqiiqada laga hadlayo waana waxa maanta hogaamiye rasmi ah oo Somaliyeed laga doonayo inuu kula macaamilo shacabkaas Somaliyeed ee ahaa kuwii ugu horeyey ee diyaarad ay leetahay dowladii iyaga xukuntay lagu garaacay ayuu yiri mid ka mid ah shacabka Hiiraan oo saadaal ka bixinayey mustaqbalka Somaliland waxa uu noqon doono hadii uu hogaanka dalka ku guuleysto Prof Warfaa.
Wadamada Africa, Africa, Yurub iyo America
Prof Warfaa hada sida muuqata waxuu xooga sarayaa kasbashada shacabka Somaliyeed oo ay ugu horeeyaan xildhibanada baarlamaanka Somaliya iyo waliba qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed oo ah kuwa uu doonayo inuu xakumo, kuwa kale waa uun wadamo dano ka leh Somaliya markii uu xilkaasi qabto ayuuna waxa ay ka doonayaan Somaliya iyo ujeedadooda ay hor keeni doonaan xukumadiisa kedibna waxii dalka iyo dadka Soamliyeed dan u ah ayaa lagula saaxiibayaa intaan ka aheyn dhaqanka, diinta, dhulka, calanka iyo waxii la hal maala.
Markaad dhinac kasta ka eegto shacabka Somaliyeed Prof Warfaa qalbigiisa iyo waaxii ku jiro ma ogan karaan laakinse waxey u arkaan nin hogaamin kara dalka cadaaladii iyo is dhax galkii ka luntay shacabka Somaliyeedna soo celin kara.
Waxaa hada si joogta ah wareysiyo kala duwan uga qaada qeybaha kala duwan ee wakaaladaha wararka Somaliya oo iyagu maqal, muuqaal, qoraal dhinac kasta kaka qaata wareysiyada maalmahani.
La soco wararka musharaxa had iyo jeer.
· admin on March 17 2011 12:40:49 · 0 Comments · 3051 Reads ·
14,600,179 unique visits